WhatsApp ၏အသံခေါ်ဆိုမှုများသည်ဖိတ်ကြားစရာမလိုပဲသက်ဝင်နေသည် Androidsis
WhatsApp အသံခေါ်ဆိုမှုသည်လူတိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးတွင်ရောက်သည် WhatsApp ၏အစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များထဲမှသက်ဆိုင်သည့်အသံခေါ်ဆိုမှုမှဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံစရာမလိုပါ။ ကောင်းပြီ၊ လူတိုင်းအတွက်လူတိုင်းမရရှိနိုင်သေးကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်သည်။ ၎င်းမှာ iOS နှင့် Windows Phone အသုံးပြုသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်များတွင်ဤလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကိုမခံစားနိုင်သေးပါ။
၏ဤအသစ်သော function ကိုသည် WhatsApp အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုဖွင့်ထားရန်ခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံစရာမလိုပဲပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးဖြစ်သော WhatsApp ၏နောက်ဆုံးမူကွဲကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ အထူးသဖြင့်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သာရှိသည် 2.12.23 လျှောက်လွှာသို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားဗားရှင်း။
သာ ဒီ link မှ apk format ဖြင့်လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါ လုံခြုံစိတ်ချရသော download အတွက်တရားဝင် WhatsApp စာမျက်နှာသို့ပို့ဆောင်မည်။ လျှောက်လွှာ၏အဓိကစာမျက်နှာတွင်လျှောက်လွှာ၏ကြီးမားသောအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည့်အလိုရှိသည့် tabs သုံးခုကိုပြလိမ့်မည်ဆိုပါက WhatsApp interface သစ်ကိုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ။ ငါဆိုလိုတာက, ခေါ်ဆိုမှုများ, ချက်တင်များနှင့်အဆက်အသွယ်များ.
သတိပြုရန်မှာ apk format ဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော application အသစ်၏ဗားရှင်းအသစ်ကို update လုပ်ရန်၎င်းကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးဖွင့်ထားရမည်ကိုသတိရပါ။ သင့်ရဲ့ Android settings, လုံခြုံရေး၊ အပလီကေးရှင်းများကိုဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းစတိုးပြင်ပရှိအရာများသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာတူတွင်တပ်ဆင်နိုင်မည်ဆိုသည့်နည်းလမ်းများ၊ မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်ပါ.
သင်၏ WhatsApp ၏ဗားရှင်းကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ သင်သည်လျှောက်လွှာကိုစတင်သောအခါနှင့်မည်သည့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုမျှမလိုအပ်ဘဲစတင်သောအခါ၊ WhatsApp အသုံးပြုသူများအကြားအသံခေါ်ဆိုမှုများလုံးဝအခမဲ့ သင်၏မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ၏ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်သို့မဟုတ်ဒေတာကွန်ယက်မှတဆင့်။ အကယ်၍ သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် application ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်သည့်အခါနိယာမအားဖြင့်သင်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုသတိမပြုမိပါက၎င်းဗားရှင်းအသစ်ရှိပြောင်းလဲမှုများသည်ဤနည်းဖြင့်ပေါ်သလား၊ ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်ကိရိယာကိုပြန်လည်စတင်ရန်အကြံပေးသည်၊ ထွက်လာတော့အပြောင်းအလဲကိုအလိုအလျောက်သက်ရောက်ရန်အနည်းဆုံးရက်အနည်းငယ်လောက်စောင့်ရပါလိမ့်မည်။
ငါကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဆိပ်ကမ်းများ၊ သူတို့ထဲကအတော်များများနှင့်ကျွန်ုပ်ဒီမှာဤတွင်ပြောနေတာကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည် WhatsApp အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုရိုးရိုးလေးအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည် ငါ apk ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သင့်ကိုဒီမှာထားခဲ့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Whatsapp » WhatsApp အသံခေါ်ဆိုမှုများသည်ဖိတ်ကြားစရာမလိုဘဲသက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
တိုးတက်လာသောပြက္ခဒိန်နှင့်အဆက်အသွယ်များရှိသည့် Microsoft Outlook ဗားရှင်းအသစ်